ဆွဲသား ဂါဝန် အား ရန်ကုန် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
? Instock ရှိပါတယ်နော် ?
⏰ Order တင်ပြီး ၂ ရက် သို့မဟုတ် ၃ရက်နေရင်ရပါမယ် ⏰
? ရန်ကုန်မြို့အတွင်း အိမ်အရောက် delivery ရှိပါတယ် ?
? Ygn မြို့တွင်း အိမ်ရောက်မှငွေချေလဲရပါတဲနော် ?
? မှာယူလိုပါက one kyat cb, vb or ph no:09452164276 သို့ ဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါတယ် ?
✌✌ update လေးတွေအမြဲတင်ပေးမယ်နော် follow ထားနော် ✌✌
အမည်: ဆွဲသား ဂါဝန်